लोक बहादुरका भाई नरेशले मलाई फ’साउन खो’ज्छस भनेपछी…. – Gandaki Chhadke
लोक बहादुरका भाई नरेशले मलाई फ’साउन खो’ज्छस भनेपछी….
By गण्डकी छड्के Last updated Sep 19, 2021
मादी नगरपालिकामा भएको ह,’त्याकाण्डमा सं’लग्न भएको आरोपमा प्रहरीले थप चार जना माथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। एकै परिवारका ६ जनाको ह,’त्यामा संलग्न स्थानिय लोकबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।
लोकबहादुरका भाइ नरेश समेत प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। ह,’त्यामा सं,’लग्न लोकबहादुर र उनका भाइ नरेश बाहेक अन्य ४ जनामाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। भदौ २१ गते बिहान लोकबहादुरले ६ जनाको ह,’त्या गरेको बताइएको छ। लोक बहादुरको बयानका आधारमा उनका भाइ नरेशलाई पक्राउ गरेको हो।
ह,’त्यामा सं,’लग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका लोकबहादुर र नरेशको ब,’यानका आधारमा अन्य ४ जना माथि समेत प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। प्रहरीले ती ४ जनाको नाम भने खुलाएको छैन। प्रहरीले मृ,’तक रञ्जनाको ह,’राएको मोबाइल लोकबहादुरको घरमा फेला पारेपछि अनुसन्धान लोकबहादुर र उनका भाइ नरेशमाथि के,’न्द्रित भएको छ।
लोकबहादुर र उनका भाइ नरेशसँगको ब,’यानका आधारमा प्रहरीले थप ४ जनालाई अनुसन्धानको दा,’यरामा ल्याएको हो। घटनाको सातौं दिन अ,’भियुक्त लोकबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो। मृ,’तक रञ्जना कार्कीको ह,’राएको मोबाइल प्रहरीले फेला पारेपछि अनुसन्धान टो,’ली पुनः घ,’टना स्थल केन्द्रित बनेको १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसपी नवीनराज राईले बताए।
ह,’त्या आरोपमा पक्राउ परेका लोकबहादुरको घरबाट बिहीबार मोबाइल भेटिएको हो। रञ्जनाको मोबाइल घटना भएको बिहानदेखि नै ह,’राएको थियो। मोबाइल स्विच अफ भएकाले प्रहरीले सम्भावित ठाउँमा खो,’जी गरिरहेको थियो। घटनाबारे थप प्रमाण फेला परेपछि सं,’घीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहालको ने,’तृत्वमा १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहित ६ जनाको टोली घ,’टना स्थ,’ल पुगेर पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
‘घटनामा अन्य व्यक्तिहरुको समेत सं,’लग्नता भएको आ,’शंकामा अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ, एसपी राईले भने। छि,’मेकीले समेत घटनाको जानकारी न,’दिँदा प्रहरी अनुसन्धानमा ज,’टिलता भएको थियो। एक जना व्यक्तिले मात्र उक्त घ,’टना गराउन नसक्ने प्रहरीकै केही अधिकारीहरुले ब,’ताउँदै आएका छन्।
लोकबहादुरलाई सार्वजनिक गरेकै दिन सं,’घीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहाल, प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख डिआईजी अरुणकुमार बीसी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो डीएसपी रुगमबहादुर कुँवरसहितको अनुसन्धान टोली आ–आफ्नो कार्यालय फ,’र्किएका थिए। थप अनुसन्धान र सु,’रक्षाका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरका प्रहरी निरीक्षक योगराज खतिवडासहितको टोली घ,’टना स्थलमै रहेको थियो।
मलाई फ’साउन खो’ज्छस भनेपछी– प्रहरीले गाउँभित्र के’रकार गर्दा लोकबहादुर प्रहरीको शं’काको घेरामा थिएनन्। किनभने मा-रि’एकाहरु उनकै पारिवारिक ना,’ताभित्रका थिए। अझ लोकबहादुरले अनुसन्धानमा ख’टिएका प्रहरीलाई ३/४ दिनसम्म खाना ब’नाइदिनेलगायतका सहयोग गरिरहे।
गाउँलेले उनीमाथि नै शं’का गरेपनि प्रहरीसँग आ,’धार थिएन। ‘सोधपुछ गर्दा ब,’यान फे’र्न थालेपछि मात्रै उनी प्रहरीको ‘नो-टि’स’मा परेका हुन्,’ डीआईजी बीसी भन्छन्, ‘त्यसपछि घर खा’नतलासी गर्दा घ,’टनाका बेला लगाएको टी–सर्ट र र’गत लागेको हा’फपेन्ट भेटियो।
’उनका अनुसार हा’फपेन्ट सुरुमा लोकबहादुरले भाइ नरेशको हो भने। दाजुभाइलाई सँगै राखेर सोधपुछ गरेपछि ‘मलाई फ’सा’उन खो’ज्छस् भन्दै’ दाइप्रति भाई आ,’क्रो’सि’त बनेको उनले बताए। दाजुभाइलाई राख्दा तेजबहादुरले लोकबहादुरलाई गा’ली गर्ने र पा’गल भन्दै हे’प्ने गरेको खुल्यो।
नरेशले नै दाजु र ब’डिबुवाको सम्बन्ध राम्रो नभएको बताए। भाइलाई राखेर कुरा गर्न र सोधपुछ था’ल्दा झ’र्को मान्न थालेका लोकबहादुरले ‘प्र’माण छ भने स,’मात्नु’ भन्दै प्रहरीलाई चु’नौती दिए। चि-र्प’ट आ’गोमा बा’लिसकेको र हा’फपेन्ट धो’एर प्रमाण न’ष्ट गरिसकेका कारण लोकबहादुर पक्राउ नपर्नेमा ढु’क्क देखिएको बीसीको भनाइ छ।
ए’सिडले ज’लेकी संगिताको गासियो लगनगाठो ।
जनतालाई सास्ती मुख्यमन्त्रीलाई मस्ती: श्र’द्धाञ्जली दिन पनि हेलिकप्टर चार्टड
‘कमरेड’ शब्द खास अर्थ के हो ? यसको कसरी उत्पत्ति भयो ?